မြ၀တီမြို့ မှနောက်ဆုံးရသတင်းများ…..။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မြ၀တီမြို့ မှနောက်ဆုံးရသတင်းများ…..။
Posted by cobra on Nov 9, 2010 in News | 8 comments
မြ၀တီ မြို့မှ နောက် ဆုံး အခြေအနေသတင်းများ
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို သိရှိရပြီဖြစ်ပေမယ့် ယမန့်နေ့ ဖြစ်ပွားသော ပြည်တွင်းစစ်ပွဲကြောင့် နအဖမှ လွှတ်တော်ခေါ်ယူခြင်းနဲ့ အစိုးရ အသစ် ဖွဲ့စည်းဖို့ကို အကန့်အသတ်မရှိ ရက်ရွေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြ၀တီ တိုက်ပွဲ သတင်းများ
နံနက်(၁၁ နာရီ ၄၄ မိနစ်
မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂ နာရီတွင် မြ၀တီမြို့တွင် တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်နိုင်တယ်လို့ ဒီကေဘီအေနဲ့ နီးစပ်သူတဦးက ပြောဆိုသည်။ ဒီကေဘီအေဘက်မှ ဦးဆောင်သူ ဗိုလ်မှူးစောလားဘွယ် ဆုတ်ခွာဖို့ အမိန့်မပေးမချင်း ဘယ်တော့မှ မြ၀တီမြို့မှ ဆုတ်ခွာမဟုတ်ဘူးလို့ ဒီကေဘီအေ ဘက်မှပြောသည်။
နံနက်(၁၁ နာရီ ၃၃ မိနစ်း
လတ်တလော အတည်မပြုနိုင်သေးသည့် သတင်းများအရ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မြ၀တီမြို့နှင့်နီးသည့် ဝေါလေ ဘက်မှလည်း တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ စစ်ရေးသုံးသပ်သူတဦး အပြောအရ တံတားတွေ ကျိုးသွားသည့်အတွက် လတ်တလော စစ်ကူလာလို့မရတဲ့အတွက် ရှေ့တန်းအထိုင်တပ်တွေကို မြ၀တီကို စစ်ကူသွားခိုင်းတော့ ရှေ့တန်းအထိုင်တပ်တွေမှာ စစ်အင်အားနည်းတဲ့ အချိန်မှာ ဒီကေဘီအေ ဘက်မှ နအဖ ရှေ့တန်းအခြေစိုက်စခန်းတွေ ၀င်တိုက်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသည်။
နံနက်(၁၁ နာရီ )
မ၀တီမြို့တွင် မနေ့က ပိတ်မိနေပြီး ထွက်မလာနိုင်ပဲ ယနေ့ မနက်ပိုင်းမှ ရောက်ရှိလာသည့် သစ္စာမဂ္ဂဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် အခြားဘုန်းကြီးကျောင်းများ ဘုန်းကြီးများ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ဓါတ်ပုံတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နံနက်(၉ နာရီ ၄၇ မိနစ်) မြ၀တီမြို့ပေါ်မှာ ဒီကေဘီအေနဲ့ နအဖ တိုက်ပွဲတွေ ရပ်လိုက်နားလိုက်နဲ့ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ AJC သတင်းဌာန ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ (ကိုးကား – AJC)
နံနက်(၈ နာရီ ၂၂ မိနစ်)
ABSDF စစ်ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ကိုခင်ကျော်မှ မြ၀တီတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော တိုက်ပွဲ အခြေအနေကို ယခုလိုသုံးသပ်ထင်ပြလိုက်ပါတယ်။ (လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဗိုလ်မှူးစောလားဘွယ် ဦးစီး DKBA အဖွဲ့က မြ၀တီစစ်ပွဲကိုရက်အတန်ကြာ ထိမ်းထားနိုင်မယ်လို့ သုံးသပ်ရပါတယ်၊ ကနေ့ ကာလ နအဖ က ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီး ကမ္ဘာကိုအလှပြနေချိန် မြ၀တီကိုသိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရ တာဟာ အရှိုက်အထိုးခံလိုက်ရသလို ဖြစ်နေတယ် နအဖ ကတတန်ပြန်ထိုးစစ် ဆင်တဲ့ နည်းရော ညှိနိုင်းတဲ့နည်းပါ သုံးမှာပါ၊ ပထမနည်းဖြစ်တဲ့ တန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်တဲ့ နည်းသုံးရင်တော့ တိုက်ပွဲကပြီးသေိးမှာမဟုတ်ဘူး။ ယာယီရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်ပေမဲ့ ရေရည်မှာ DKBA က တိုက်ပွဲပုံစံပြောင်း ပြီး တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွာယးမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတောင် အင်အားတောင့်တင်း လာနိုင်မယ်၊ ဘ၀တူတွေက လက်ပိုက် ကြည့် နေကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ တွေ့ဆုံ ညှိနိုင်းတဲ့နည်းနဲ့ ရန်သူကသုံးရင်တော့ ဗိုလ်မှူးကြီးစောလားဘွယ်တို့က နိုင်ငံရေးအရပါ စကား ပြောလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်၊)
နံနက်(၇ နာရီ ၃၅ မိနစ်) ဒီကေဘီအေနှင့်နအဖ တိုက်ပွဲဖြစ်သောကြောင့် ကလေးကျောင်းသွားကြိုသော ကြံ့ဖွတ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးလည်း သေဆုံးသွားကြောင်း သိရှိရသည်၊ သေဆုံးသူ ၁၀ ဦးတက်မနည်းရြှိ့ပီး… ဒဏ်ရာရသူ ၃၀ နီးပါးခန့်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခုနောက်ဆုံးရ မြဝတီသတင်းများ….. မြန်မာစံတော်ချိန် (မနက် ၁၁နာရီ)
မြဝတီမြို့မှာ ပြည်သူတော်တော်များများ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ပိတ်မိနေပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်…။ နအဖဘက်မှလည်း ညကလမ်းပေါ်တွေ့တွေ့သမျှလူတွေကို ပစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်..။ နအဖမှ နောက်ထပ်(၁)နာရီ အတွင်း ပြည်သူတွေ မြို့ထဲကထွက် သွားဖို့ လိုက်လံကြေငြာနေပါတယ်… ပြီးခဲ့တဲ့ ညက DKBA နဲ့ အဖွဲ့၃ဖွဲ့ခန့် သွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်..။ သေဆုံးနေသူတွေရဲ့ အလောင်းတွေကို ကောက်လို့ မရတော့တဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများမှ ဆိုပါတယ်…။ အခြား ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေက ကော့ကရိတ်နဲ့ မြ၀တီနဲ့ ကြားမှာ စုပေါင်း လှုပ်ရှားနေကြတယ်လို့ ယူဆရတယ်လို့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းများက ဆိုပါတယ်..။ ဘုရားသုံးဆူမှာတော့ DKBAမှ အပေါ်စီးမှ အသာရလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းပေးပို့လာသူမှ ပြောဆိုသွားပါတယ်..။
နောက်တစ်ဦးကတော့ ကမ်းနားမှာ သတင်းထောက်များစွာဟာ ၃ချောင်းထောက်ကင်မရာတွေနဲ့ မြ၀တီဘက်ကိုချိန်ထားပါတယ်.. ထိုင်းစစ်သားတွေကတော့ လုံခြုံရေးသတိနဲ့ရွေ့လျားသွားလာနေကြပါတယ် ..မြ၀တီဘက်ကမ်းကနေ မိသားစုတွေ ကူးလာနေကြဆဲပါပဲ..။ သူတို့ကတော့ စစ်တပ်ဝင်နေပြီ စစ်ကားတွေပတ်နေတယ်..။ ရှောင်ကြဘို့ ပြောပါတယ်.. ညက တံတားမှာ ဗုံးကွဲတာကတော့ အမှန်ပါပဲ အကောက်ခွန်ဂိတ်(တံတားပေါ်က) ပျက်ဆီးသွားပါတယ်ဟု မျက်မြင်သက်သေ ကမ်းနားနေသူတစ်ဦးမှ ပြောဆိုပါတယ်
<span>ယခုနောက်ဆုံးရ သတင်းအရ.. </span>လက်ရှိ တိုက်ပွဲ ပြန်စနေပြီ တော်တော်ဆူညံနေတယ် ဖုန်းထဲမှာတောင် တော်တော် ဆူညံနေပါတယ်… မြဝတီမှ DKBAတပ်များအား KNU မှဝင်ရောက်ကူနေပြီလို့ ဆိုပါတယ်.. လက်ရှိမှာ မြို့တွင်းတိုက်ပွဲသာဖြစ်နေပြီး ပြင်ပသို့ ကူးစက်လာပါက.. နောက်ထပ် DKBA (၅၀၀) နှင့် KNU စစ်သား (၉၀၀) ကျော် တိုက်ပွဲတွင် ပါဝင် လာနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိ မြ၀တီမြို့ထဲရောက်နေသာ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးတပ်မှာ အင်အား (၃၀၀) ခန့်ရှိပါတယ်”..။ <span>ယခု မြို့ထဲမှာ DKBAကို ဝင်ကူနေတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲရှိပြီး (နာမည်တော့ မဖော်ပြနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ) KNU က နအဖ စစ်တပ်တွေကို လမ်းကြောင်းဖြတ်ပေးနေတာပါ… ကျွန်တော်တို့ တခြားအဖွဲ့တွေကို စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်။ မပါလာရင်တော့ အဖွဲ့၅ဖွဲ့နဲ့ပဲ ဆက်တိုက်သွားရလိမ့်မယ်။ လက်ရှိပါဝင်နေသူမှ ပြောဆိုသွားပါတယ်
လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ မြဝတီမှာ ကျန်ရှိပိတ်မိနေသူတွေရဲ့ အခက်အခဲနဲ့ အသက်အန္တရာယ်က အင်မတန်မှ အရေးကြီးနေပါပြီ.. နအဖကတော့ မြဝတီ ပြာကျရင်ကျပါစေ.. သူတို့ အသာစီးရဖို့ပဲ ကြိုးစားနေတာပါ.. ပြည်သူတွေ အသက်အိုးအိမ်ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ မစဉ်းစားဘူးဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားပါ… ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေအတွက် မြဝတီမြို့ကို နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီလို အဖွဲ့အစည်းမျိုးက ဝင်ရောက်ကူညီပေးနိုင်အောင် လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက နောက်မကျစေဘဲ အလျှင်အမြန် တောင်းဆိုပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်
ထိုင်းဘက် မှ တုန့်ပြန်ချက်
နေ့ လည် ၁း၀၀ ထိုင်း ပြည်သူများ ထိမှန် မှု ကြောင့် ထိုင်း အမှတ် ၅ ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ ဆူပါချော့ကီ သာဝတ် ပီရာချိုင်း နှင့်အဖွဲ့ လာရောက် တပ်ဆွဲ ၁၁း၀၀ မြ၀တီ မြို့ တွင်း တိုက်ပွဲ များ ပိုမိုပြင်းထန် လာ နေပြည်တော် မှ ဓာတု လက်နက် တင်ဆောင် လာသည့်ရဟတ် ယာဉ် မြ၀တီ မြို့ သို့ ရောက် ရှိ ဟု ထိုင်း ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ တစ်ဦးက FNG သို့ ပြော၁၀း၄၅ မြ၀တီမှာ ယောက်ကျားတွေအားလုံးပြေးရပြီ စစ်တပ်က ပေါ်တာအတွက် လိုက်လံဖမ်းဆီးနေ
နံနက် ၁၀း၃၅ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ ဝင်လေးဦး မဲဆောက်ဆေးရုံရောက်-မြ၀တီ ခယက ဥက္ကဌ အား DKBA အဖွဲ့ ဝင်များဖမ်းဆီးထား (မြ၀တီ – ကော့ကရိတ် ကားလမ်း ရှိ တံတားများကို ချိုး ပြီး စစ်တပ် က ဆုတ်ခွာ)
ထိုင်-မြန်မာ နယ်စပ် ကရင် ပြည်နယ် မြ၀တီ မြို့ အား DKBA ဗိုလ်မှုး ချုပ် စောလားပွယ် (နှုတ်ခမ်းမွေး) ၏တပ်များက ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက် မှု ကြောင်း ယနေ့ မနက် ၉း၃၀ အချိန် တွင် နှစ်ဖက် တပ်များ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားရာ မြ၀တီ မြို့ မှာ လက်နက်ကြီး ကျဉ် ပေါက်ကွဲ သံများ ၊သေနတ် ပစ်ခတ် သံများ ဖြင့် ဆူညံနေပြီးသင်္ကန်းညီနောင် တွင် မူ နအဖ စစ်တပ် က အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများ ကို ဓားစားခံ လုပ်ထား သည် ဟု သိရှိရသည်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် အတွင်း မြ၀တီ မြို့ တွင်း ရောက်ရှိနေသည့် နိုင်ငံခြား သတင်းထောက် တစ်ဦးနှင့်FNG က တနင်္လာနေ့နံနက် ၁၀း၃၀ မိနစ် တွင် ဆက်သွယ်ရာဉ် လက်နက်ကြီး အလုံး လေးဆယ် နှင့်မနည်း ကျရောက် ပေါက်ကွဲ ခဲ့သည် ဟု သိရသည်။ မြ၀တီ မြို့ တွင်းအပြန် အလှန် ပစ်ခတ်သံများ ကိုထိုင်း နိုင်ငံ မဲဆောက် မြို့ မှ ကြားနေရပြီး ထိုင်း စစ်တပ် ကလည်း နယ်စပ် တစ်လျှောက် လုံခြုံရေး တိုးမြင့်ထားသည်။
ဝေါ နှင့် မော်လမြိုင်
ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ် ပြည်သူက မကျေနပ်မှု နှင့် ပြန်လည် နိုးထ လာသည့် ပြည်တွင်းစစ်မီးကြောင့် နအဖ စစ်အစိုးရသည် ဝေါ၊မော်လမြိုင် နှင့် ဘားအံ တွင် ညမထွက်ရ အမိန့် များ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ရွေးကောက် ပွဲ ရလာဒ် သပိတ်မှောက် ရန် စီစဉ် ထားမှု နှင့် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး တွင် အရေးပါသည့် မြ၀တီ မြို့ DKBA လက်တွင်း ကျရောက် ခဲ့မှု ကြောင့် ရန်ကုန် မြို့ တွင် အခြေခံစားကုန် ဈေးနှုန်းများ ချက်ခြင်း ခုန် တက်သွားသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့နာရီပိုင်းအတွင်းက မြဝတီ×မဲဆောက်တံတား မြဝတီဘက်အခြမ်း မှာ ပေါက်ကွဲသံတွေနဲ့ အတူ တံတားကျိုးသွားပုံရတယ်လို့ မဲဆောက်မြို့မှ ပေးပို့လာတဲ့ သတင်းများအရ သိရှိရပါတယ်…။ ကျိုးသွားတဲ့ ပမာဏကိုတော့ မသိရှိရသေးဘူးလို့ အဆိုပါ ပေးပို့လာသူက ဆိုပါတယ်..။
မြဝတီမြို့တွင်းမှာ ပိတ်မိနေတဲ သူတော်တော်များမှ ဖုန်းဖြင့် အဆက်အသွယ် ပြုလုပ်လာကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်..။ ဘုန်းကြီးကျောင်း တော်တော်များများ အတွင်း သံဃာတော်များ ပိတ်မိနေကြောင်း သိရှိရပါတယ်…။ မိသားစုများ ထိုင်းဖက်ရောက်သူ မြဝတီမှာ ကျန်ခဲ့သူများ ပျောက်ဆုံးသူများဖြင့် တစ်ကွဲတစ်ပြားဆီ ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရပါတယ်…။်လောလောဆယ် နှစ်ဘက်စလုံး ငြိမ်သက်လျှက်ရှိပြီး.. နအဖမှ ယခုညအတွင်း ဝင်ရောက်စီးနင်းမည်ဟု သတင်းလွှင့်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်..။ မြဝတီဆေးရုံအား ဆက်လက် ဖွင့်ထားကြောင်းနှင့် အချို့နေရာများမှာ မီးများဆက်လက် လောင်ကျွမ်းလျှက် ရှိနေကြောင်း သိရှိရပါတယ်…။ မြို့တွင်းရှိDKBA တပ်များအား တစ်ခြား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ဝင်ရောက်ပူးပေါင်း ကူညီရန် စီစဉ်လျှက်ရှိကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်..။
မြန်မာ စံတော်ချိန် ည (၁၁)နာရီ ကျော်ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက် ဖြစ်ပါတယ်.
ဧရာဝတီက ရရှိတဲ့ အတည်ထပ်မံ မပြုနိုင်သေးတဲ့ သတင်းများအရ ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာ အထူးအစည်းထိုင်ပြီးတော့ မြဝတီက DKBA နဲ့ နအဖတပ်တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကို တခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ပါမလာခင် အပြီးအပြတ် ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ ချေမှုန်းပစ်ဖို့ ဗိုလ်သန်းရွှေက အမိန့်ပေးလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
DKBA ဘက်ကနေ KNU တပ်မဟာ (၆) က ကူမယ်လို့ ဗိုလ်ကြီး စောထဲနေက ဧရာဝတီကို အလွတ်သဘော ပြောကြားသွားပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာ ထိုင်ဘက်အခြမ်းကို ထွက်ပြေးလာတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် သောင်းဂဏန်းနဲ့ ချီတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခု ဒီပို့စ်ကို ရေးနေတုန်း အရေးပေါ် ဝင်လာတဲ့ သတင်းအရ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက မြန်မာ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၃ သောင်းလောက် ရှိနေပြီ၊ မဲဆောက်ဘက်မှာ ပြည့်နေပြီလို့ ပြောကြောင်း သိရပါတယ်။
ဖိအားတွေကြောင့်တိုက်တယ်လို့ SSA- South ခေါင်းဆောင် ပြော
ထိုင်း- မြန်မာနယ်စပ် မြဝတီမြို့မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ DKBA က ဗိုလ်မှူးကြီး နှုတ်ခမ်းမွေး တပ်တွေနဲ့ စစ်အစိုးရတပ်တွေကြားက တိုက်ပွဲတွေ ဟာ DKBA တပ်တွေအပေါ်ကို စစ်အစိုးရက ဖိအားပေးလွန်းတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (တောင်ပိုင်း) SSA- South ခေါင်းဆောင် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရွက်ဆစ်က ဒီနေ့မှာပဲ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ခြင်းဟာလည်း ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားစေတဲ့ နောက်ထပ် အကြောင်း အရင်းတခုဖြစ်တယ်လို့ SSA- South ခေါင်းဆောင်က ဌာနချုပ် လွိုင်တိုင်းလျန်းကနေ ဧရာဝတီကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ ပြောဆိုပါတယ်။
အခုတိုက်ပွဲဟာလည်း စစ်ရေး အကဲခတ်တွေ ပြောဆိုနေတဲ့အတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေကို ချေမှုန်းတဲ့ သဘောမျိုး ဟုတ်၊ မဟုတ် ဆိုတာကိုလည်း SSA- South က အထူး စောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့လည်း SSA- South ခေါင်းဆောင်က ပြောဆိုပါတယ်။
SSA- South အဖွဲ့ဟာ ခန့်မှန်းချေ အင်အား ၇ ထောင်အထက် ရှိတယ်လို့ စစ်ရေးလေ့လာသူတွေက သုံးသပ် ကြပါတယ်။
ဘုရားသုံးဆူကို DKBA သိမ်းပိုက်
သတင်းများကို အားပေးနေလျက်ပါဗျို .
မြ၀တီမှာ ရှိတဲ့လူအားလုံး ဘေးကင်းလို့ရန်ကွာ……. ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေလို့ပဲ ကျွန်တော်တို့တွေ ဆုတောင်းပေးကြတာပေါ့ဗျာ
အာ ……. စစ်တိုက်နေပါတယ်ဆိုမှ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ လို့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားကွယ် …..
ဒီ သတင်းကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ရသမျတင်ပေးကြဘို့ပြောပါရစေ။
ပြည်သူတွေအန္တာရယ်ကင်း ဘို့ကအဓိက အရေးကြီးပါတယ်။ရှောင်နေတာက အန္တာရယ်အကင်း ဆုံးပါ။
””တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ခြင်းဟာလည်း ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားစေတဲ့ နောက်ထပ် အကြောင်း အရင်းတခုဖြစ်တယ်လို့ SSA- South ခေါင်းဆောင်က ဌာနချုပ် လွိုင်တိုင်းလျန်းကနေ ဧရာဝတီကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ ပြောဆိုပါတယ်။””
စစ်တပ်က စစ်တပ်လိုတွေးပြီး နိုင်ငံေ၇းလုပ်မှာပဲ..။
ဒါက ဗျူဟာကျကျလုပ်တဲ့ အာရုံလွှဲတဲ့ စစ်ပွဲဖြစ်ဖို့ များတယ်..။
များတယ်ဆိုတာ … ဖြစ်တာမဟုတ်ဖူးနော…..၊